महँगीको चरम मारमा उपभोक्ता, सरकार मूकदर्शक - Sagarmatha TV
महँगीको चरम मारमा उपभोक्ता, सरकार मूकदर्शक
काठमाडौं – अबको तीन सातापछि दसैं सुरु हुन्छ । दसैं अर्थात् अधिकांश नेपाली जनताको प्रमुख चाड । दसैंपछि लगत्तै सुरु हुन्छ तिहार, त्यसपछि छठ । तर, यी प्रमुख चाड नेपाली जनताका लागि सुखद् बन्ने स्थिति देखिँदैन ।
बढ्दो महँगीका कारण अधिकांश जनता सहज ढंगले यी चाड मनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । एकातिर कोरोना महामारीका कारण उपभोक्तासँग पैसा छैन, त्यसमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो महँगी ।
यो अवस्थामा महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने हो तर सरकार मूकदर्शक बन्दा जनता भने मारमा परिरहेका छन् ।
अब जाऊँ हालको बजार भाउतिर । अहिले बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय ६५ देखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
गत वर्षको लकडाउन अघिसम्म सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर १ सय ६५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । तर, अहिले लिटरमै १ सय रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था छ । गत वर्षको दसैंताका चिनी प्रतिकिलो ८५ देखि ९० रुपैयाँसम्म पाइन्थ्यो । तर, अहिले ९५ देखि सय रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रकुमार ब्रजाचार्य अहिलेको बजार भाउ सामान्य रूपमा लिन सकिने कारण देख्दैनन् । ‘कुनै कारणबिना नै ठूला थोक व्यापारीहरूले मनपरी ढंगले मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन्,’ उनको भनाइ छ ।
बज्रचार्यका अनुसार चिनी प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँ वृद्धि भएर ९५ देखि १ रुपैयाँ पुगेको छ । खाने तेलको मूल्य लकडाउनयता मात्र प्रतिलिटर सय रुपैयाँ बढेको छ । सनफलावर तेल लकडाउनअघि १ सय ६५ रुपैयाँ पाइन्थ्यो भने अहिले २ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाएर ‘हाँडीगाउँको जात्रा’ मनाइयो
प्रधानमन्त्री देउवा पूर्वी नेपालको बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा
बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट्दै
पाकिस्तानमा हिंसात्मक झडप, ६ जनाको मृत्यु
सिरियामा वनमा आगो लगाएको आरोपमा २४ लाई फाँसी, ११ लाई आजीवन कारावास
चर्को भाडा लिने १३ सवारी कारबाहीमा, ५० यात्रुको पैसा फिर्ता
खोलाले बगाउँदा एक बालकको मृत्यु, एक बेपत्ता
मुख्यमन्त्री आचार्यले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा आज मत विभाजन हुँदै
गुडिरहेको बसमा आगलागी, सबै यात्रु सकुशल
गुल्मीमा खोलाले यात्रुवाहक जिप बगायो
साफ च्याम्पियनसिपः नेपालविरुद्ध बंगलादेशको अग्रता
खाना खाने बित्तिकै झुक्किएर पनि नगर्नुस् यस्ता काम
व्यापार बन्दै ठगी धन्दा बनिसक्यो आयुर्वेदः डा. प्रदीप केसी
टेलिकमले ल्यायो ‘फेस्टिबल अफर’, के के छन् सुविधा ?
एउटा साइकलको मुल्य ४ करोड !
यस्तो छ साङ्ला मार्ने घरेलु तरिका
भारतीय टेलिभिजनको हिट डान्स रियालिटी शो ‘सुपर डान्सर ४’ बन्द हुँदै
मोतिपुरमा झण्डै एक हजार ‘पेट्रोल बम’ र घरेलु हतियारहरु भेटिएको प्रहरीको दाबी
सामूहिक हत्याका अभियुक्त पक्रने प्रहरी पुरस्कृत
११ जिल्लाका सीडीओ फेरिए, को कहाँ पुगे ?
६ घण्टापछि चल्न थाल्यो फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टा, शत प्रतिशत काम गर्न अझै समय लाग्ने
खुल्यो न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ